कसरी मिलाउने खानपानमा सन्तुलन - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ २४, सोमबार (१ साल अघि)
पोषणविद्हरु भन्छन्, खाना नै सम्पूर्ण औषधि हो । यसको अर्थ खानामा ति सबै कुरा सामेल हुन्छन्, जो हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको लागि जरुरत हुन्छ । शरीरलाई निरोगी राख्न, फुर्तिलो बनाउन, उर्जावान राख्न, दीर्घायु बनाउन खानपानको मूख्य भूमिका हुन्छ । खाना खानु भनेको भोक मेट्नु वा जिब्रोको तलतल मेट्नु मात्र होइन । बरु, स्वस्थ जीवनयापन गर्नु हो ।
तर, कस्तो खानपान ?
यो प्रश्न किनपनि उठ्छ भने खानपानकै कारण अहिले हामी रोगी र जीर्ण हुँदैछौं । विश्वमा अहिले जतिपनि रोग देखिएका छन्, त्यसमा खानपान पनि एउटा कारण बनेको छ । अर्थात खराब खानपान रोगको कारण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ताजा, सुपाच्य, सन्तुलित खानपान जरुरी हुन्छ ।
खाना कसरी सन्तुलित हुन्छ त ?
यसको फाइदा पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ ।
–सन्तुलित आहारले गर्भवती महिलालाई आवश्यक पोषण प्रदान गरी गर्भमा रहेको शिशु, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको बृद्धिविकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
–यसले शरीरमा उर्जाको प्रवाह गर्छ, शरीरलाई विभिन्न रोगसित लड्न मद्दत गर्छ ।
सन्तुलित आहारले एनिमिया, मोटोपना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह , स्ट्रोक, अस्टियोपोरोसिस, क्यान्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ ।
आहारको अवधारणालाई बुझ्न अझै सजिलो होस् भन्नका लागि आहारलाई निम्न समूहमा विभाजित गरिएको छ ।
–अन्न तथा आलु (कावोहाइड्रेट्स)
–फलफूल तथा सागसब्जी ९ भिटामिन तथा खनिज०
–दूधजनय पदार्थ ९प्रोटिन तथा क्याल्सियम०
–माछा, मासु, दाल, गेडागुडी ९प्रोटिन०
–तेल (फ्याट ÷वोसो)
एउटा सन्तुलित भोजनमा आवश्यक अनुपातमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रोटिन, ६० देखि ८० प्रतिशत कार्बोहाइडे«ट्स, तथा १० देखि ३० प्रतिशत फ्याट समावेश हुन्छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न पानीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सामान्यतया, एक स्वस्थ वयष्कलाई दिनमा कम्तीमा आठ देखि दश गिलास पानी सेवन गर्न सुझाव दिइने गरिन्छ ।
किनकी हामीले जे खान्छौ, त्यो सबै खानेकुराले शरीरलाई पोषण नमिल्न सक्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न आहारमा अन्न, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन, फ्याट , खनीज पदार्थलाई समावेश गर्न जरुरी छ । साथमा शारीरीक गतिविधि गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, गलत खानपानले मोटोपना र विभिन्न रोगको समस्या निम्त्याउँछ । त्यतिमात्र हैन, शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पोषकतत्व प्रदान नभएमा यसले कुपोषणको समस्या समेत निम्त्याउने गर्छ ।